TOP NEWS: Dhageyso Xasan Shiikh oo kala diray Gudiga doorashooyinka ee Muranka uu ka dhashay+Yaa ku qasbay in uu gudigaas kala diro Madaxweynaha ???? – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Dhageyso Xasan Shiikh oo kala diray Gudiga doorashooyinka ee Muranka uu ka dhashay+Yaa ku qasbay in uu gudigaas kala diro Madaxweynaha ????
by Tifaftiraha K24 24th June 2016 24th June 2016 019
Shalay waxaa shir ku yeeshay magaalada Baydhabo Danjirayaasha beesha Caalamka Soomaaliya u fadhiya gaar ahaan kuwa taageera geeddi socodka doorashooyinka iyo Hoggaamiyaasha Soomaalida, sida aan ku baahinay Idaacaddeenii Xalay.
Haddaba war dhawaan ka so baxay Xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu sheegay in la isla gartey in wax laga beddelo guddigii doorashada ee heer federaal oo keliya laga saaro dhamaan Siyaasiyiinta ku jira laguna beddelo guddiyo farsamo, si loo helo kalsoonida lagu qabi karo guddigaas.
Madaxweynaha oo uu dhinac taagan yahay Eragyga Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa yiri:
“Doorashadan muhiim ayay u tahay dhismaha Soomaaliyada cusub ee dimoqraadiga ah.Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah inaan wax walba oo fiican u hurno. Sidaa daraadeed guddiyada doorashada ee heer gobol iyo heer federal, waxaan isku raacney in siyaasiyiinta laga reebo, hawlahaasina loo daayo guddiyo farsamo si aan u kasbano kalsoonida shacabka, una abuurno xaalad horseedi karta doorashooyin xalaal iyo xor ah oo dalka ka dhaca. Waxaa dhammaanteen naga go’an in doorashada ay qabsoonto waqtiga loogu talagaley’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Guddiga Doorashooyinka ee dhawaan Madaxweynuhu wareegtada ku saarey ayaa gaarayey 22 xubnood, kuwaas oo dhamaantood ay ahaayeen Wasiiro, Shaqaalaha Xafiisyada madaxda sare iyo Xildhibaano.
Magacyada Gudiga Doorashada ee laga Saaray Siyaasiyiinta
14-Cabdicasiis Shiikh Xuseen Dayib, Aqoonyahan Jubaland
15-Cabdiraxmaan Aadan sale , Wasiir Koonfur Galbeed
22-Raaxo Maxamed Janaqow, Gobolka Sh/dhexe
Halkan Ka Dhageyso Codka Madaxweyne Xasan Sheekh
TOP NEWS: Dhageyso Maxaadan Ogeyn oo Naxdin ah oo Xalay ka dhacay Dagmada Afgooyeb xili Si wada jir ah loo dilay Aabo iyo…
War Cusub: Ciidamada Badda Talyaaniga oo Xeebaha Badda Dhexe ee Mediterranean-ka ka soo Bad baadiyay Muhaajiriin tiradoodu gaareyso ilaa….
SAWIRRO: Xuutiyiinta oo soo bandhigay khasaarihii ay gaarsiiyeen ciidanka Sacuudiga.
Dhagayso:- Khudbadi madaxweyne C/wali Maxamed Cali Gaas ee uu maanta ka jeediyay Shirka Geedi socodka 2016